एकता कान्तिपुर र अन्नपूर्णमा मात्रै ! पत्रकारको आकर्षण अनलाईन मिडिया
काठमाडौं, २६ असोज । कमिशन एजेण्ट बनेका साहुजीहरु ! सोमबार एकाएक मिडियामा हल्ला फैलियो नेपाली कांग्रेस र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबीच अपरान्ह चार बजे पार्टी एकिकरण हुने । त्यो समाचार कान्तिपुर दैनिकको अनलाईन सस्करण र अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाईन सस्करणले लेखेका थिए ।
त्यसपछि त्यो समाचार प्राय सबै अनलाईनले कपि पेष्ट गरे । तर, एकता मिडियामा मात्रै भयो । समाचार बाहिर आएको तीन दिन वित्दासम्म दुई पार्टीबीच एकताको सुइको समेत छैन । लोकतान्त्रिक फोरमका उपाध्यक्ष रामजनम चौधरी भन्छन् ‘पार्टी एकता हुनेबारे कान्तिपुर र अन्नपूर्ण पोष्टलाई थाहा होला, हामीलाई थाहा छैन् ।’
यसले मिडियाको विश्वसनियता कस्तो बनाउँला ? स्रोतलाई उध्रित गरेर हुँदै नभएको समाचार लेखेपछि अर्कोदिन ति मिडियाका समाचारलाई कसले विश्वास गर्ने ?
पत्रकारको आकर्षण अनलाईन मिडिया
नयाँ आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि विजयादशमी भत्ता पाउने आशमा मिडिया परिवर्तन गर्न रोकिएका पत्रकारहरु दशैपछि धमाधम नयाँ स्थानमा जागिर सुरु गर्ने क्रममा छन् । पत्रकारहरुको आकर्षण पुराना र प्रतिष्ठित मिडिया छोडेर अनलाईन समाचार पोर्टलतिर देखिएको छ ।
हिमाल म्यागेजिनबाट जेवी पुन मगर नेपाल खवर अनलाईनको हङकङ सम्पादक भएर गएका छन् । त्यस्तै कान्तिपुर पव्लिकेशन अन्र्तगतको नेपाल म्यागेजिनबाट सिताराम बराल पनि नेपाल खवर अनलाईनकै समाचार संयोजक बनेर गएका छन् ।
यो क्रम नयाँमा मात्रै होइन केहि समय अघिबाट चल्दै आएको छ । १६ भदौबाट सुरु भएको नेपाल लाइभ अनलाईनमा नागरिक दैनिकबाट दुर्गा दुलाल, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट सिताराम कोइराला पुगेका थिए ।
त्यस्तै सोहि अनलाईनको सम्पादक पनि केहि समय अघि कान्तिपुर दैनिक छोडेर बसेका सरोजराज अधिकारी बनेका छन् ।
यता अन्नपूर्ण पोष्टको अनलाईन सस्करणका सम्पादक रेवती सापकोटाले राजीनामा दिएका छन् । उनी कान्तिपुर दैनिकमा आवद्ध हुनका लागि त्यहाँबाट राजीनामा दिएको बताइन्छ ।
हरेक कुरामा भारतले गिद्धेदृष्टि: 'नेपालको सिमाना नापी विवादमा'
किन बोल्छन् भारतीय सेनाध्यक्ष नेपाल बारे मनपरी ?
‘यसकारण रेडलाइट र क्यासिनाेकाे विषयमा बहस गराै‌’ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ (मुख्यमन्त्री)
मधेश छुटै देश माग्न सक्ने महन्त ठाकुरको उदघोष, यस्तो आयो प्रधानमन्त्रीको अपिल, इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरे तत्काल कारवाही गरिने
जिल्लिए वामदेव, केपीविरुद्ध मोर्चाबन्दीको तयारी